के ‘गर्भावस्था’ को बेला दोस्रो – पटक पनि बस्न सक्छ गर्भ ?
के कुनै महिला गर्भ’वती हुँदा हुँदै फेरि भ्रुण ग्रहण गर्न सक्छ ? यदि तपाईंले गर्’भावस्थाको केही हप्तापछि भ्रुण गर्भाशयमा पुनः प्रत्यारोपण गर्ने कुरा आयो भने तपाईंको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? मेडिकल भाषामा यसलाई सुपर फि’टनेस प्रेगनेन्सी या डबल प्रेग्नेन्सी पनि भन्ने गरिन्छ ।
सुपरफेटेशन गर्भावस्थामा महिला गर्भवती भए तापनि फेरि गर्भधारण गर्न सक्छिन् । वास्तव’मा, धेरै पटक गर्भवती भैसकेपछि पनि गर्भमा अण्ड वा शुक्राणुद्वारा नि’षेचित गरिन्छ । यो गर्भावस्थाको पहिलो केही हप्तामा हुन सक्छ । विशेषज्ञका अनुसार दोस्रो गर्भावस्थामा समस्या पैदा गर्न सक्छ । धेरै मामिलामा नवजात शि’शु पनि कु’पोषित हुन सक्छन् ।
जुम्ल्याहा बच्चा हुनु र सुपर फेटेसनको अवस्था दुई फरक परिस्थितिहरु हुन् । जब एक महिलाले एक पट’कमा १ देखि ३ वटा भ्रुण धारण गर्छिन्, त्यसलाई जुम्ल्याहा गर्भावस्था भनिन्छ । जबकि सुपरफेटेशनमा महिला एक बच्चा जन्माएपछि केही हप्तापछि फेरि गर्भवती हुन्छिन् । सुपर फेटेसनको मा’मला प्रायः माछा, गोही जस्ता प्रजातिहरुमा हुन्छ । मानिसहरुमा यसको सम्भावना धेरै कम छ ।
के दुवै बच्चाहरु ए’कै सम’यमा जन्मिन्छन् ?
भ्रूण विभिन्न स’मयमा प्रत्यारोपण गरिए पनि डेलिभरी एकै समयमा हुन्छ । यदि भ्रूणको गर्भधारणमा धेरै समय फरक प¥यो भने बच्चा जन्माउने समयमा जोखिम बढी हुन्छ । अर्काे भ्रूण डेलिभरी ३७ सप्ताहभन्दा पहिले भयो भने बच्चा कु’ पोषित हुन सक्छ ।
किन सुपर फे’टेसनलाई अद्वितीय मानिन्छ ?
वास्तवमा जब एक म’हिला गर्भवती हुन्छिन्, तब शरीरको प्रजनन हार्मोनहरु पूरा तरिकाले काम गर्न बन्द गर्छ । जसको कारणले अण्ड काम गर्न अ’सक्षम हुन्छ । त्यसकारण पनि सुपरफेटेसनलाई अनौंठो घटना मानिन्छ ।
कुन महि’लामा यस्तोको अधिक सम्भावना हुन्छ ?
विशेषज्ञका अनुसार आईभीएफ, प्रजनन उपचार वा हार्मोनको उपचार गर्ने महिलाहरुमा सुपरफेटेशनको सम्भावना बढी हुन्छ । किनभने उनीहरुको अण्डाशय पहिले नै बच्चाको लागि तयार भइसकेको हुन्छ । त्यस्तै, गर्भावस्थाको समयमा यौ ‘न सम्बन्ध राख्दा पनि फेटेसनको स’मस्या बढ्न जान्छ ।
बच्चा जन्मेपछि सास फेर्न स’मस्या, नवजातमा कम तौलको स’मस्या, बच्चालाई खाना खुवाउन क’ठिनाई हुनु, मस्तिष्कमा रक्तस्राव हुन, अविकसित फोक्सोको कारणले सास फेर्ने स’मस्या हुनु
२०७८ भाद्र ६, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 153 Views